Iyo yesafire kristaro yeApple Watch Series 3 Edition inoshora sei? | Ndinobva mac
Iyo yesafire kristaro yeApple Watch Series 3 Edition inoshora sei?
Kuyedzwa kwerudzi urwu kunogara kwakanaka kuona kushorwa kwekuti idzi mhando dzezvinhu dzine zvinopfuura izvo makambani pachawo anotiratidza. Mune ino kesi, vhidhiyo yatinayo mushure mekusvetuka inotiratidza humbowo hwe kuramba kwesafiri kristaro yeiyo nyowani Apple Watch Series 3 ($ 1299) maringe neTissot ine mhando imwechete yesafiri crystal.
Apple inoita nhamburiko dzese kuratidza kuti ino girazi reiyo Series 3 Edition modhi inodzivisa mabrasions uye kukwenya, asi zvakanakisa kuona zvakananga muvhidhiyo kana ichi chiri chokwadi uye pamusoro pezvose kusvika padanho ravanosimudza. Isu kuSpain hatina mukana wekutenga aya Apple Watch Edition mamodheru, ayo akagadzirwa nekramiki nesafiri, asi muUnited States iwo ari, uye vamwe vanotsunga kuita bvunzo idzi kuti vaone kuti vanomira zvakadii.
Iyi ndiyo kesi yeiyo YouTube chiteshi che Jerry rig zvese, iyo inotitaridza muvhidhiyo ino yemaminitsi angangoita matanhatu ekuomesa kuedzwa kwerudzi urwu rwegirazi. Zviripachena, iyo yesafiri kristaro yeApple Series 3 Edition wachi iri panzvimbo yepamusoro maererano nekusimba, asi kusvika papi?
Iwe unogona kuona mune ino vhidhiyo kuti iyo Tissot modhi mune iyi kesi, inorova iyo Apple Watch uye kwete zvishoma. Mawachi ese ari maviri ane chinhu ichi chakabatanidzwa mugirazi pamwe nekuratidzwa mumiyedzo, asi nyaya yewachi yeSwitzerland inoita kunge inopesana kupfuura Apple. Mhedziso idzo dzega dzega dzavanotora sekuda kwavo, asi izvo zvinoonekwa muedzo uyu ndezvazvo Safiri yaApple inoshomeka zvishoma pane yaTissot. Chero zvazvingaitika, ese mamodheru ane ichi chinhu anodzivisa abrasions uye anokwenya zvakanyatsonaka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iyo yesafire kristaro yeApple Watch Series 3 Edition inoshora sei?
Isu takaedza iyo nyowani yePrintworks 2 app
Maitiro ekudzikisira kubva ku macOS High Sierra kusvika macOS Sierra